Budada Lapatinib (231277-92-2) hplc = 98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / Qaar kale waxay / Lafatinib budada (231277-92-2)
SKU: 231277-92-2. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada Lapatinib (231277-92-2), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka kantaroolka tayada la socon karo.
Fiidiyowga Lapatinib video
Budada Lapatinib Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Lapatinib
Formula kelli: C29H26ClFN4O4S
Miisaankani waa: 581.05
Dhibcaha Biyaha: 136-140 ° C
Root Lapatinib budada ee wareegga Agentoplastic Agentoplastic
Magaca Guud: Dufanka Lapatinib (La PA)
Magaca Calaamadda: Tykerb
Isticmaalka budada Raw Lapatinib
Kiniiniga Lapatinib waa dawo rijeeto oo loo isticmaalo dawo kale (capcitabine) si loogu daaweeyo dadka qaba kansarka naasaha oo ku faafay meelo kale oo jirka ka mid ah oo HER2 positive (burooyin oo soo saaro qadar badan oo boroti ah oo loo yaqaan 'epidermal growth factor receptor-2) , iyo kuwa hore u lahaa daaweyn kansarka naasaha kale ah.
Daawada Lapatinib waxaa sidoo kale loo isticmaalaa nooc daawo ah oo loo yaqaan 'letrozole' oo loogu talagalay daaweynta haweenka postmenopausal oo leh hormoonka hormoonka haboon, HER2 oo leh kansar naas nuujin ah oo loogu talagalay daaweyn hormoon ah.
Budada Lapatinib waa dawo rijeeto loo isticmaalo daaweynta kansarka naasaha. Waxaa loo isticmaalaa daawooyinka kale si loo daaweeyo nooc ka mid ah kansarka naasaha oo ku faafay qaybaha kale ee jidhka oo aan ka jawaabin daweynta kansarka kale.
Daawada Lapatinib waxaa ka mid ah koox daawooyinka loo yaqaan 'kinase inhibitors' kaas oo ka shaqeynaya joojinta ficilka borotiinka qaarkood oo muujiya unugyada kansarka si loo badiyo.
Dawadani waxay ku dhacdaa qaab kiniin ah waxaana la qaadaa hal mar maalin calool madhan.
Waxyeellooyinka caamka ah ee ka yimaada budada Lapatinib waxaa ka mid ah casaan, gacmo iyo lugo xanuun, shuban, firiiric, iyo lallabo.
Waa maxay qiyaasta budada Lapatinib
Qiyaasta Cudurka Qaaxada ee caadiga ah ee Kansarka Naasaha
-HER2-POSITIVE MEDASTATIC BREAST CANCER (oo ay la socoto xarfantin): 1250 mg halkiiba hal jeer maalintii Maalmaha 1 ee 21 si joogto ah ugu soo noqnoqonaya wareegyada 21-maalmood ilaa illaa cudurada ama sunta aan la aqbali karin.
-HORMONE RECEPTOR-POSITIVE, HER2-POSITIVE NAFAQADA KONTOROOLKA KANSARKA (oo ay la socdaan haemoszole): 1500 mg afka ah hal mar maalintii.
-Ku dar siinta macluumaadka soo saaraha wax soo saarka ee loo yaqaan capecitabine iyo talooyinka loo yaqaan 'letrozole'.
-HER2-oof-wareerka ku salaysan naas-nuujinta naas-nuujinta bukaanka waa in ay yeeshaan xanuunka trastuzumab ka hor inta aan la bilaabin daaweynta daroogada taas oo ay weheliso capecitabine.
-In la isku daro capecitabine ee daaweynta bukaanka qaba kansarka naasaha ee sareeya ama sareeya ee burkoodu uu aad u sarreeyo HER2 iyo kuwa helay daaweynta hore oo ay ku jiraan anthracycline, taxane, iyo trastuzumab.
-In la isku daro haistozole oo loogu talagalay daaweynta haweenka postmenopausal oo leh hormoonka hormoonka-naas-nuujinta kansarka naas-nuujinta oo si weyn u xoojiya daaweeye HER2 oo loogu talagalay daaweynta hoormoonka daaweynta.
Xogta aan la heli karin oo ku saabsan qiyaasta qiyaasta; Si kastaba ha ahaatee, farmasokokinetics-ka daawadani uma badna in ay saameyn ku yeeshaan taas oo ka yar 2% qiyaasta daawada la karkariyo kelyaha.
MILKU DHACAYA MUSTAQBALKA HEPERTIINTA HEPATALKA (CARRUURTA AAN BUUXINTA A / B): Macluumaadka aan la heli karin.
KA HORTAGIDDA CUDURRADA HEPE (CUNTADA-CUDUR C): Iska yaree qiyaasta:
-HER2-Kansar Kacsan ee Kansarka Naasaha (oo lagu daro capecitabine): 750 mg / maalin.
-Hormo-Dib-u-daweenta-Horumar, HER2-Kacsan ee Kansarka Naas-nuujinta (oo laysku geeyo haayrozole): 1000 mg / maalin
MACLUUMAADKA KA HORTAGISTA CUDURADA DHALINYARADA: Si joogta ah u jooji daaweynta.
Faallooyinka: Talooyinka hagaajinta qiyaasta waxay ku saleysan yihiin daraasadaha daawooyinka farmashiyaha; ma jiraan xog caafimaad oo la heli karo.
KALA-XIRIIRKA ISTICMAALKA ISTICMAALKA CYP450 3A4 IYO / AMA CALAAMADAHA CUDURKA 450A3: Ka fogow isticmaalka wadajirka ah haddii ay macquul tahay. Talooyinka hagaajinta qiyaasta ah waxay ku saleysan yihiin daraasadaha daawooyinka farmashiyaha; ma jiraan xog caafimaad oo la heli karo.
XADIISKA ISTICMAALKA CUDURRADA 450A3 INHIBITOR: Iska yaree xaddiga 4 mg / maalin; u ogolow muddada isgaadhsiinta ee qiyaastii 500 ka hor inta aan la isku dhejin daawadaas qiyaasta talada caadiga ah haddii daaweenta la joojiyo.
XADIISKA ISTICMAALKA QALABKA CYP450 3A4 INDUCER: Qadarka kor u kaca ee titrate ku salaysan dulqaad; hoos u dhigista qiyaasta daawada ee lagu taliyey haddii daaweenta la joojiyo.
-HER2-Kansarka Naas-nuujinta leh ee Kansarka Naasaha (oo ay weheliso capecitabine): Kordhiya qiyaasta xmUMX mg / maalin.
-Hormo-Dib-u-daweenta-Horumar, HER2-Kacsan ee Kansarka Kansarka Naasaha (oo lagu daro letrozole): Kordhiya qiyaasta xmUMX mg / maalin.
GRADE 2 ama BADBAADEEDA LAGU QAADO LABA DHEXE LABA DHIBAATOOYINKA LAGU HESHIISO AMA LAGU QAADO DARAASKA SOO BANDHIGIDA DHALINYARADA NORMALKA: Jooji daaweynta; waxaa laga yaabaa in uu dib u bilaabo qiyaasta la yareeyey ka dib ugu yaraan toddobaadyada XNUM haddii LVEF ay soo kabato caadi ahaan iyo bukaanku waa asymptomatic.
Qiyaasaha La Yareeyey:
-HER2-Kansarka Kansarka leh ee Kansarka Naasaha (oo lagu daro capecitabine): 1000 mg / maalin
-Hormo-Dib-u-daweenta-Horumar, HER2-Kacsan ee Kansarka Naas-nuujinta (oo laysku geeyo haayrozole): 1250 mg / maalin
MAGAALADA 3 AMA DHAMMAAN 1 ama 2 DIARRHEA ILAALINTA QIIMEYNTA (qallooca dhexdhexaad iyo caloosha oo daran, Qalabka 2 ama lallabo ama matag badan, xaaladda hoos u dhaca, qandhada, sepsis, nutropenia, dhiig baxa, ama fuuqbax): Waxaa laga yaabaa inay dib u bilaabaan qadar yar marka shuban xallineysaa 1 ama ka yar.
-HER2-Bukaanka Naas-Nuujinta Kacsan ee Kansarka ah (oo ay weheliso capecitabine): 1000 mg / maalin
-Hormo-Dib-u-daweenta-Hawl, HER2-Maqnaanshaha wanaagsan ee kansarka naasaha ee bukaanada: 1250mg / maalin
GRADE 4 DIARRHEA: Si joogta ah u jooji daaweynta.
WAXYAABAHA WAX-KA-QAADASHADA, MAGAALADA 2 ama DADKA: Waxaa laga yaabaa inay ka fikirto joojinta ama joojinta qiyaasta; waxaa laga yaabaa in uu dib u bilaabo qiyaasta caadiga ah ee lagu taliyey marka suntu ay hagaagto heerka 1 ama ka yar.
HADDII DAAWEYNTA KHATARAHA: Iska yaree qiyaasta:
Sidee buu u shaqeeyaa budada Lapatinib?
Budada Lapatinib waxaa loo isticmaalaa capecitabine (Xeloda) si loogu daaweeyo nooc ka mid ah kansarka naasaha ee hore ee dadka horey loogu daaweeyey daawooyinka kale ee kemotherabi. Budada Lapatinib waxay ku jirtaa nooc daawo ah oo loo yaqaan 'kinase inhibitors'. Waxay ka shaqeysaa joojinta ficilka borotiinka aan caadiga ahayn ee calaamadaha unugyada kansarku ku dhufanayaan. Tani waxay caawisaa joojinta ama gaabinta faafidda unugyada kansarka.
U sheeg dhammaan bixiyeyaashaada daryeelka caafimaadka in aad qaadato budada Lapatinib. Tan waxaa ka mid ah takhaatiirta, kalkaaliyayaasha, farmashiistaha, iyo dhakhaatiirta ilkaha.
Haddii aad caloosha ku xanuunto, tuurto, saxaro dabacsan (shuban), ama aanad gaajoon, la hadal dhakhtarkaaga. Waxaa jiri kara siyaabo lagu yareeyo waxyeelooyinkaas.
Saxaro dabacsan (shuban) ayaa ku dhacay budada Lapatinib. Mararka qaarkood, shubanka aad ayuu u xunaa, dhimashaduna way dhacday. Kala hadal dhakhtarkaaga.
Haddii aad leedahay saxaro dabacsan (shuban), la hadal dhakhtarkaaga. Ha isku dayin inaad daaweyso shubanka adiga oo aan marka hore hubin dhakhtarkaaga.
Shaqada dhiigga hubi sida dhakhtarku kuu sheegay. Kala hadal dhakhtarka.
Waxaad ubaahnaan doontaa baaritaanka wadnaha ee wadnaha adoo qaadanaya budada Lapatinib. Kala hadal dhakhtarka.
Iska ilaali digaagada iyo cabitaanka rootiyada.
Haddii aad qaadatid digoxin, la hadal dhakhtarkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad shaqadaada dhiiggaaga si fiican u hubiso intaad qaadaneyso budada Lapatinib.
Daawadani waxay u keeni kartaa cunuga aan dhalan haddii aad qaadato inta aad uurka leedahay.
Isticmaal xakameynta dhalmada oo aad ku kalsoon tahay si looga hortago uurka inta aad qaadaneysid budada Lapatinib.
Haddii aad uur leedahay ama aad uur leedahay adigoo qaadanaya budada Lapatinib, wac dhakhtarkaaga si sax ah.
Lapatinib Root Powder
Suuq-geynta Lapatinib Sale
Miyuu qoyan yahay Lapatinib-ga wax saameyn ah leh
Ayadoo la raacayo saameyntiisa loo baahan yahay, budada Lapatinib waxay keeni kartaa saameyn aan la rabin. Inkastoo aaney dhammaan dhibaatooyinkan daaweyntu dhici karaan, haddii ay dhacaan waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad.
Si dhakhso leh u hubi dhakhtarkaaga haddii mid ka mid ah waxyeelooyinka soo socda ay ku dhacaan markaad qaadanayso budada Lapatinib:
Dhibaato ama neefsasho ku shaqeynaya
wadna garaacid ama aan joogto ahayn
daal aan caadi ahayn ama daciifnimo
Xanuun ama calool xanuun ama calool xanuun
dhoobo saxaro ah
cuncun ama finan maqaarka ah
lallabbo iyo matagid
bararka cagaha ama lugaha hoose
indhaha ama maqaarka
Xaalad aan la ogeyn
Qalabaynta, diirka, loosinta maqaarka
dareenka guud ee raaxada ama jirrada
xanuun ama murqo xanuun
duufaanka ama bararka indhaha ama indhaha, wajiga, dibnaha, ama carrabka
Dhibaatooyinka maqaarka guduudan, badanaa leh xarun madow
casaan, indho xanaaq
nabarrada, boogaha, ama dhibco cad oo afka ama bushimaha
xajinta dheecaanka maskaxda
Dhibaatooyinka qaarkood ee ka yimaada budada Lapatinib ayaa dhici karta in badanaa uma baahna daryeel caafimaad. Dhibaatooyinkan ayaa laga yaabaa inay baxaan inta lagu jiro daaweynta marka jidhkaaga uu daaweynayo daawada. Sidoo kale, xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka ayaa laga yaabaa inuu kuu sheego siyaabaha looga hortagi karo ama loo yareeynayo qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca. Ka hubi xirfadlahaaga daryeelka caafimaad haddii mid ka mid ah waxyeelooyinka soo socda uu sii socdo ama uu ku dhibto ama haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid:
Caan ka badan
Acid ama caloosha
xanuunka gacanta ama lugaha
guduudasho, barar, ama maqaar xanuun
maqaarka maqaarka iyo gacmaha iyo lugaha
nabarrada, boogaha, ama dhibco cad oo ku yaal afafka, afka, ama gudaha afka
caloolxanuun, xanaaq, ama xanuun
barar ama infakshan afka
xoqidda gacmaha iyo cagaha
Sida loo iibsado budada Lapatinib laga soo qaado AASraw
Lapatinib Roodhada Rootiga ah: